ANDROID ပေါ်မှာ BOOTLOADER UNLOCK လုပ်နည်း - MOBILE DEVICES - 2019
အဓိက Mobile devices
Android ပေါ်မှာ Bootloader Unlock လုပ်နည်း
သငျသညျ (သင် Kingo Root နဲ့တူဒီအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုနေသည်မဟုတ်လျှင်) အမြစ်အရ, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံ firmware ကို rekaveri တင်ထားရန်ဖြစ်လျှင်, သင်ရပါမည်, သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ် Bootloader (loader မှ) Unlock ။ ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကနည်းလမ်းသော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်မဟုတ်, Third-party အစီအစဉ်များ။ Android ပေါ်မှာ TWRP ထုံးစံ rekaveri install လုပ်နည်း :. ကိုလည်းရှုပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း Bootloader ကို bootloader ကိုအများဆုံးဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာနိုင်ပါတယ်သော့ဖွင့် - Nexus 4, 5, 5x နှင့် 6P, Sony, Huawei ကအများစု HTC နှင့်အခြားအကို (nameless တရုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖုန်းများ မှလွဲ. တစ်ခုတည်းအော်ပရေတာများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပြဿနာ) ။
အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်: သငျသညျကို Android ပေါ် bootloader ကို unlock တဲ့အခါမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုနဲ့အတူညှိသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားကြသည်မဟုတ်လျှင်, ဒီ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပါ။ ဒါ့အပြင်မှားယွင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုံ Bootloader ကိုသော့ဖွင်အတွက် crash သင့်ရဲ့ device ကိုရိုးရှင်းစွာမရှိတော့ပါဝင်သည်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်လာသောအခါ - အန္တရာယ်များကိုသင်ယူဆ (ထိုအာမခံဆုံးရှုံးအမျှကောင်းစွာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေ - ဤနေရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ) ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက် - စတင်မှီ, အပြည့်အဝသင့်ကိရိယာ၏ဘက်ထရီကိုအားသွင်း။
Bootloader ကို Bootloader unlock ဖို့က Android SDK ကိုနဲ့ USB driver ကို Download လုပ်ပါ
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း - က Android SDK ကို tools တွေကို developer ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် download လုပ်ပါ။ အပိုင်း "အခြား download, ရွေးချယ်မှုများ" ကိုက //developer.android.com/sdk/index.html နှင့် scroll သွားပါ။
အဆိုပါ SDK ကို Tools များသာလျှင်အပိုင်း, သင်၏သင့်လျော်သောဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။ ငါလုပ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်က folder ထဲမှာ decompress ထားတဲ့ Windows အတွက်ကို Android SDK ကိုအတူ ZIP ဖိုင် archive ကို, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Windows အတွက်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ရိုးရှင်းသော installer ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Android SDK နှင့်အတူ Folder ကို, (ကမစတင်ပါဘူးဆိုရင် - ကိုယ့်ပုံပေါ်ပြီးတော့ပြတင်းပေါက်ပျောက်သွားမှာ, ဒါ့အပြင် java.com အရာရှိတဦးက site မှ Java ကို install) ဖိုင်ကို SDK Manager ကို run ။
(သင်တစ်ဦးက Nexus ရှိပါက, စာရင်းကိုရဲ့အဆုံးမှာက Google ကို USB driver ကိုမဟုတ်လျှင်) စစ်ဆေးမှုများအမှတ်က Android SDK ကိုပလက်ဖောင်း-tools များစတင်ပြီးနောက်ကျန်ရှိသောအပိုဒ်မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ အထုပ်များ button ကို Install ကိုနှိပ်ပါ, လာမယ့် window တွင် - ထိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ဖို့ "လိုင်စင် Accept" ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါ, Android SDK Manager ကိုပိတ်ပါ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင့် android device အတွက် USB driver ကို download လုပ်ပါဖို့လိုတယ်:
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Nexus အတွက်သူတို့က, SDK Manager ကိုကနေတဆင့်တင်ဆောင်နေကြသည်။
Huawei ကယာဉ်မောင်းများအတွက် utility ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် HiSuite
HTC ကအဘို့ - HTC Sync Manager ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်
Sony Xperia ယာဉ်မောင်းများအတွက် //developer.sonymobile.com/downloads/drivers/fastboot-driver ၏တရားဝင် website ကနေ download လုပ်
LG က - LG က PC ကို Suite
USB Debugging ကို Enable
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - Android ပေါ်မှာက USB debugging ကို on လှည့်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
နှိမ့်ချ scroll Setting ကိုသွားလိုက်ပါ - "။ ကိုဖုန်းအကြောင်း"
ထပ်တလဲလဲသင်ပြုစုသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုသည်အထိ "အရေအတွက်က Build on" ကိုနှိပ်ပါ။
"Developers များအတွက်" နောက်ကျောအဓိက Settings စာမျက်နှာကိုသွားပါ, အဲဒီနောက်ကို item ဖွင့်လှစ်။
က "ဒီဘာဂ်" ၌ "ကို USB ဒီဘာဂင်" enable ။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ OEM သော့ဖွင့်ပစ္စုပ္ပန် parameters တွေကိုကို item ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ်မှာလှည့်။
အဆိုပါ Bootloader (မည်သည့် Nexus ဘို့မလိုအပ်) သော့ဖွင့်ဖို့ကုဒ် Get
Nexus (က Nexus ပင်အောက်ပါထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးလျှင်) မှလွဲ. အများဆုံးဖုန်းများသည် bootloader ကို unlock ရန်အဘို့အဖွင့်သော့ဖွင့်ဖို့ကုဒ်ရရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်စာမကျြနှာကိုကူညီလိမ့်မယ်:
Sony Xperia - //developer.sonymobile.com/unlockbootloader/unlock-yourboot-loader/
HTC က - //www.htcdev.com/bootloader
Huawei က - //emui.huawei.com/en/plugin.php?id=unlock&mod=detail
LG က - //developer.lge.com/resource/mobile/RetrieveBootloader.dev
ထိုအစာမကျြနှာမှာတော့သော့ဖွင့ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားနှင့် device ကို ID ကိုအပေါ်သော့ဖွင့် code ကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ code အနာဂတ်တွင်လိုအပ်ပါသည်။
ငါကကွဲပြားခြားနားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်, လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရှင်းပြသွားဘူးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများ (အင်္ဂလိပ်လိုသော်လည်း) အပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြမှသာ Device ကို ID ကိုရယူဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
Sony Xperia ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ကုဒ်အဘို့သင့်ရဲ့ IMEI အတွက်အထက်ပါ website တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် Huawei ကကုဒ်ကိုလည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ရရှိသောနှင့်လိုအပ်သောဒေတာများကိုဝင်ရောက်ခြင်း (တယ်လီဖုန်းခလုတ်ကုဒ်သုံးပြီးဝင်ရောက်နိုင်သည့်အတွက်ကုန်ပစ္စည်း ID ကိုအပါအဝင်, ရသောသငျသညျ prompt ကို) ကိုယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ site ပေါ်တွင်နိုင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် HTC နှင့် LG ကတစ်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်ကိုရှိသည်။ ကားသော့ဖွင်ကုဒ်ရရှိရန်ရရန်မည်သို့ဖော်ပြခြင်း, စက်ပစ္စည်း ID ကိုပေးလိုအပ်ပါသည်:
(လုံးဝပါဝါခလုတ်, မယ့်မျက်နှာပြင်ကိုင်ပြီးအားဖြင့်) သင့်ရဲ့ Android device ကိုပိတ်ထားပါ
စာနယ်ဇင်းနဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထား + သင် fastboot mode မှာက boot screen ကိုကြည့်ရှုသည်အထိဆင်းအသံ။ HTC ကအဘို့အဖုန်းများ fastboot volume ကိုခလုတ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ခေတ္တမျှပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးအတည်ပြုရွေးဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကိုသင့်ကွန်ပျူတာကို USB ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
(ထိုအာကာသအတွက်) Right-click နှိပ်ပြီး, ဖိုင်တွဲထဲမှာကလစ် Shift ကိုဖိထားပြီးထို့နောက်ပလက်ဖောင်း-tools များနှင့် "ပွင့်လင်း command ကိုပြတင်းပေါက်" ကိုရွေးချယ် - ဖိုင်တွဲကို Android SDK ကိုသွားပါ။
အဆိုပါ command prompt ကိုရိုက်မှာ fastboot oem device ကို-id သည် (LG ကအားဖြင့်) သို့မဟုတ် fastboot oem get_identifier_token (ကို HTC သည်) နှင့် Enter နှိပ်ပါ။
သငျသညျအများအပြားလိုင်းများအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောဂဏန်း code ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကသော့ဖွင့် code ကိုရရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်သောကိရိယာ ID ဖြစ်ပါတယ်။ LG ကသာဖိုင်ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကိုစေလွှတ်နေပါတယ်။
မှတ်စု: သင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာသူတို့ကိုမှအပြည့်အဝလမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ဘဲ, အကောင်းဆုံးဖိုင်တွဲပလက်ဖောင်း-tools များအတွက်ထားသောမေးလ်၌သင်တို့ထံသို့လာသောသူသည်, ဖိုင်များ .bin Unlock ။
သငျသညျ fastboot mode ကို (HTC နှင့် LG ကအဘို့အအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့), ယခုအချိန်တွင်မှတက်လာမည့်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်မလိုအပ်ပါဘူး command များကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သည်အခြားကိစ္စများတွင် Fastboot mode ကိုထဲသို့မဝင်ရ:
(အပြည့်အဝခုနှစ်) သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပိတ်ထားပါ။
စာနယ်ဇင်းနှင့် Fastboot mode သို့ဖုန်းကိုဘွတ်ဖိနပ်အထိပါဝါခလုတ် + အသံအတိုးအကျယ်ကိုချကိုင်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို USB မှတ်နေတဆင့်သင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
ထို့နောက်သင်ရှိသည်ဖုန်းအဘယ်အရာကိုမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. အောက်ပါ command များထဲကတစ်ခုရိုက်ထည့်:
fastboot flash သော့ဖွင့် - က Nexus 5x နှင့် 6P များအတွက်
fastboot oem unlock - အခြားက Nexus (အဟောင်း) အတွက်
fastboot oem unlock kod_razblokirovki Unlock_code.bin - HTC က (- သင်မေးလ်၌သူတို့ရရှိထားတဲ့ file ကိုဘယ်မှာ Unlock_code.bin) သည်။
fastboot flash ကိုသော့ဖွင့် unlock.bin - (- သင်တို့ကိုစေလွှတ်ဖိုင်ကိုသော့ဖွင့် unlock.bin ရှိရာ) ကို LG သည်။
Sony Xperia များအတွက် Bootloader ကိုသင်မော်ဒယ်၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်ဒါထွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလွန်သွားပါလိမ့်မယ်ရှိရာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်သော့ဖွင့်ဖို့မှာထား၏။
သင်ဖုန်းပေါ်ရှိ command ကို run တဲ့အခါ, သငျသညျလညျး, Bootloader ကိုအတည်ပြုချက်ကိုသော့ဖွင့် "Yes" ကိုအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်ကို select နှင့်ခေတ္တမျှပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အမိန့်နှင့်အချို့သောစောင့်ဆိုင်း (file တွေကိုဖျက်ပစ်ပါနှင့် / သို့မဟုတ်သင်က Android screen ပေါ်မှာမြင်သောလူသစ်တွေမှတ်တမ်းတင်နေစဉ်) သင့် bootloader ကို unlocked Bootloader ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်
အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များကို အသုံးပြု. ထို့နောက်မျက်နှာပြင် fastboot နှင့်ခေတ္တမျှသငျသညျ device ကို reset သို့မဟုတ်စတင်ရန်ရှေးခယျြနိုငျပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပါ။ သော့ဖွင့်ပြီးနောက်အန်းဒရွိုက် Bootloader ကို run နေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာ (10-15 မိနစ်) များအတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင်, စိတ်ရှည်ခြင်းရှိကြလော့။
ဗီဒီယို Watch: ANTUTU BENCHMARK MIUI KIWII - XIAOMI REDMI NOTE4MTK (အောက်တိုဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Mobile devices 2019